ငါဘယ်သူလဲ? PT. 2: မွေးစား — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
မကြာသေးမီကငါစတိဗ်ဂျော့ဘ်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုဖတ်, Apple ကနောက်ကွယ်ကတည်ထောင်သူနှင့်အမြော်အမြင်, ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ. သူတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ဦးပါရမီနှင့်တစ်ဦးအရူးလူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်ဖတ်ရှုဖို့အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့သည်. သူ၏အသက်တာရှေ့ဦးစွာ မှစ. အဆုံးတိုင်အောင်တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့.
တစ်ဦးယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုတွေ့သောအခါသူ၏အသက်တာကိုစတင်, သူတို့လက်ထပ်မီကကလေးတစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်, နှင့်မွေးစားအဘို့သူ့ကိုအပ်. ဒီကယ့်သူ့ကိုအပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်, သူအမြဲစွန့်ပစ်ခံစားခဲ့ရသောကြောင့်,, သူကနောက်ပိုင်းတွင်သူ့ကိုယ်ပိုင်သားသမီးများ၏တဦးတည်းစွန့်ပစ်.
သို့သော်ဇာတ်လမ်း၏စိတ်ဝင်စားစရာအစိတ်အပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမှတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနှင့်မေတ္တာရှင်မိသားစုကသူ့ကိုမွေးစားဖြစ်ပါတယ်. ထိုသူတို့ကတကယ်အတွက်သူ့ကို ယူ. မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သားကဲ့သို့သူ့ကိုကုသ. သူ၏အဖေအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့်သူ့ကိုကောင်းကောင်းလက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရာများအတွက်တစ်ဦးတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပေး၏. နှင့်သူ၏မိဘများကသူ့ကိုအောင်မြင်တိုင်းအခွင့်အလမ်းပေးစေခြင်းငှါအလွန်ကြီးစွာသောပူဇော်သောယဇ်ကိုဖန်ဆင်း.
ယခုသူ၏အောင်မြင်မှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းသူ့ကိုမွေးစားသောသူလူတို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့ခဲ့. သူတို့ကသူ့ကိုပုံဖော်. သူတို့ကသူ့တိုင်းချထားသော, စိတ်ကူးနေရာချပေးတောင်မှလမ်းသူဘာမှမဖြစ်ပျက်ပါစေနိုင်ကြောင်း, မိမိသဘောထားနှင့်ယုံကြည်ချက်မှလှူဒါန်းခဲ့.
ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါလှပသောအရာတစ်စုံတစ်ယောက်မျှတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတာဝန်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်း. သူတို့ကကလေးတစ်ဦးကိုဆက်ကပ်ဖို့ဘာမျှမရှိတယ်မြင်, သူတို့သညျသူတို့ရှိအရာအားလုံးဆက်ကပ်. အဆိုပါကလေးငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုဖြစ်ပြီးသူတို့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သဘောတူ. သူတို့ကလုပျပေးရနျတာဝနျရှိမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ကြင်နာမှုထဲကထိုသို့ပြု.
သင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောလူများညျဘုရားသခငျ၏မွေးစားနညျးလမျးမြားစှာရှိဆင်တူသည်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုချမှတ်ရန်ရှိသည်ပါဘူး. ဘုရားသခင့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး. ငါတို့သည်သူ့ကိုပူဇော်ဖို့ဘာမျှမရှိသည်. ကျနော်တို့အသည်းအသန်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုများမှာ, ဘုရားသခငျသညျသူတို့အားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကတိပြုထားသည်.
ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဘုရားသခငျသညျသူနှင့်တွေ့ဆုံကျပန်းလေးတွေချမှတ်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုပြစ်မှားကြသူသူပုန်များချမှတ်သည်. ဘုရားသခင့ရာဇဝတ်ကောင်ချမှတ်သည်. ဘုရားသခငျသညျအဆင်းလှပေမယ့်ကျိုးပဲ့သောအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုချမှတ်သည်. သူ့နဲ့တူမချစ်လည်းမရှိသောကွောငျ့ဘုရားသခင့်နှင့်တူမျှကလေးမွေးစားရှိပါတယ်.
ယောဟနျသမှာကြည့်ရှုကြပါစို့ 1:10 အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုစတင်ရန်.
"သူကကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျခဲ့, နှင့်ကမ္ဘာသူ့ကိုတဆင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, သေးကမ္ဘာပေါ်တွင်သူ့ကိုမသိခဲ့ပါ. သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,, မိမိလူတွေကသူ့ကိုမခံမယူခဲ့ပါ. ဒါပေမယ့်သူ့ကိုခံယူပွုခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အား, အဘယ်သူသည်မိမိနာမအကိုယုံကြည်, သူသညျဘုရားသခငျ၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏, အဘယ်သူသည်မွေးဖွားခဲ့, မအသှေးကိုမျှမရဇာတိပကတိ၏အလိုတော်၏မဟုတ်သလိုယောက်ျား၏အလိုတော်၏, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်၏။ " (ယောဟနျသ 1:10-13)
ငါတို့ကဲ့သို့တိုင်းပြည်အတွက်အသုံးအများဆုံးယူဆချက်တစ်ခုမှာလူတိုင်းဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်အဘယျသို့မင့်. ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားလာတဲ့အခါသမ္မာကျမ်းစာကသွန်သင်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်၏ရန်သူများကို. ထိုအခါကမျြးစာကိုကွောကျစရာကောငျး ပို. ပင်တစ်ခုခုသင်ပေး, ကျနော်တို့မာရ်နတ်၏သားသမီးမွေးဖွားလာနေ. ဒါကကျွန်တော်ဦးချိုရှိသည်သောမဆိုလိုပါ, ငါတို့မူကားမာရ်နတ်အောက်ပါနှင့်ငါတို့လုပ်ရပ်တဖန်သူ၏တူသညျဘုရားသခငျရဲ့တူထက်ကြည့်ရှုကြောင်းဖွင့်ကြောင်း.
အခုတော့လူအတော်များများယနေ့ရယ်စရာနှင့်သည်းမခံသောအသံပြောချင်. "ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကလေးအားလုံးပါပဲ,"သူတို့ပြောစေခြင်းငှါ,. ကောင်းစွာ, ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းနေနှင့်သဘောအရသူ၏အမျိုးအနွယ်နေ, ဒါပေမဲ့ကမျြးစာကိုအများကြီးပိုပြီးကဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးကြသောအခါဆိုလိုသည်. ဒါဟာကလေးတစ်ဦးရဲ့ဇီဝဖခင်ဖြစ်ခြင်းအကြားခြားနားချက်ဆင်တူင်, ဒါပေမဲ့တကယ်ကသူတို့ရဲ့အသက်တာ၌ဖြစ်ခြင်းမ, တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အဖေဖြစ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, သူတို့ကိုမေတ္တာရှင်, သူတို့နှင့်အတူကစားခြင်း, နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်မှုယူပြီး.
ဒါဟာသင့်မိသားစုသို့မွေးဖွားခဲ့ပြီးခံတူမဖွင့်, အရာများသောအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ဖြစ်ပျက်. အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်အဲဒီမှာရှိပါတယ်, အသစ်တစ်ခုကိုဖွားမြင်, တစ်ကူးပြောင်း. သင့်ရဲ့မိဘများဖြစ်သောကြောင့်သင်တစ်ဦးသားသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏သမီးမပါပဲ, သို့မဟုတ်သင်၏မိတ်ဆွေများကြောင့်, သို့မဟုတ်သင်ဖြစ်လိုသောကြောင့်,.
ကျွန်တော်တစ်ဦးသားသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏သမီးဖြစ်လာမယ့်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့သူ့မိသားစုသို့မွေးစားခံရဖို့ရှိသည်. သို့သော်မည်သို့သောအဖြစ်ပျက်ပါဘူး?
သင်သည်ကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးချင်. တိုင်းယခုပြီးတော့ငါကလေယာဉ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်, ငါသူတို့သညျဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျဆံရေးတိုဖြစ်စေမလာမယ့်ငါ့အဖို့လူကိုမေးပါလိမ့်မယ်. ထိုသူတို့ကအများအားဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ, ငါဘာကြောင့်သူတို့ကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်. ငါသူတို့ကအပေါ်အခြေခံအဘယျသို့သူတို့ကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်? ဒါကြောင့်တစ်ဦးအတန်းမှာတက်လမ်းလျှောက်နေသည်, ဒါမှမဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာထပ်ခါထပ်ခါ, သို့မဟုတ်တစ်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ရှု?
ကျနော်တို့ဖတ်အဆိုပါကျမ်းပိုဒ်တော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတယ်, "သူ့ကိုခံယူပွုခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အား, အဘယ်သူသည်မိမိနာမအကိုယုံကြည်, သူသညျဘုရားသခငျ၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏…သငျသညျယရှေုကိုခံယူကြသောအခါ "ဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပျက်. ထိုအသင်မည်သို့သညျယရှေုကိုခံယူကြပါ? သူ၏နာမယုံကြည်သောအားဖြင့်.
ဒါကြောင့်မိမိအကလေးအဖြစ်ကမ္ဘာမြေအပေါ်တိုင်းတစ်ခုတည်းလူ့ဖြစ်လျက်ရှိချမှတ်ရန်ကမ်းလှမ်းသောဤချမ်းသာကြွယ်ဝပရဟိတအဖြစ်ဘုရားသခင့စိတ်ကူး. ထိုမင်းသည်မေးတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာသငျသညျယုံကွညျခွငျးအားဖွငျ့မိမိသားကိုခံယူကြောင်း. သင်သည်ထိုမိသားစုထဲမှာနေ.
ယခုငါတို့ "ဟုသူကဖွင့်မပြောပေသတိထားမိမှာမိမိအဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းယုံကြည်."သူကပြောပါတယ်"သူ၏နာမယုံကြည်."တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့သင်ကြားမှုယုံကြည်သောနှင့်တစ်ဦးအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ယုံကြည်ကိုးစားအကြားတစ်ဦးအလွန်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါသည်. ယောဟနျသလက်ခံရရှိယရှေုကမိမိနာမ၌တစ်ဦးချင်းစီ-ယုံကြည်ကိုးစားကြောင်းပြောနေ, သူကမိမိကိုယျကိုထင်ရှားအရာအားလုံးဖြစ်.
မိတ်ဆွေများဒါ, ငါသည်သင်တို့ကိုသင်တို့ကိုပြောဘို့မလောက်မမူသည်ကိုသိမှတ်ချင်, "ငါသည်ယေရှု၏သွန်သင်ခြင်းအချို့အတွက်ယုံကြည်, ကျနော်တို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ရမည်ယုံကြည်, ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းသွားသင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ "ယောဟနျသညျကိုလက်ခံရရှိသည်မိမိနာမ၌ယုံကြည်သူကိုဆိုလိုသည်ဟု! ယေရှု၌သင်တို့၏ယုံကြည်မှုချပြီး. ယေရှု၏အားလုံး.
အဆုံးမှာ, လူနှစ်မျိုးရှိပါသည်ယရှေုသညျမှကြွလာသောအခါ: သူတို့သည်မှောင်မိုက်ချစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငြင်းပယ်သောသူတို့သနှင့်သူ၏နာမ၌ယုံကြည်သောသူတို့အ.
“ငါအလင်းကဲ့သို့ဤလောကသို့လာကြပြီ, အကြင်သူသည်ငါ့ကိုယုံကြည်သောသည်မှောင်မိုက်၌မတည်မနေစေခြင်းငှါဒါ။” (ယောဟနျသ 12:46)
တခါတရံငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားယေရှုအကြောင်းအချို့သောအချက်အလက်များနှင့်အတူသဘောတူညီကြောင်းထင်. ငါကငါထင်သောအရာကိုသိ. သို့သော်ယုံကြည်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားသည်. ဒါဟာသူသည်အဘယ်သူသည်အကြောင်းကိုအချက်အလက်များ သိ. င်နှင့်သူပြုသောအမှုအရာကို, သူတို့အားအချက်အလက်များနှင့်အတူသဘောတူ, နှင့်ယုံကြည်ကိုးစားသူတို့အပျေါမှာသင်၏အသက်တာသူတို့ကို-အလောင်းအစား.
သငျသညျသူကိုဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောထားပါသည်သတိထားမိမှာ, မွေးဖွားခဲ့သောသူတို့အား "အဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ပြ, မအသှေးကိုမျှမရဇာတိပကတိ၏အလိုတော်၏မဟုတ်သလိုယောက်ျား၏အလိုတော်၏, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်၏။ "
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သွားနေလျှင်သူသည်တကားဟုင်, ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မွေးဖွားဖို့ရှိသည်. ဒါကကျနော်တို့အသစ်တွေလုပ်နေဆိုလိုသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းမိမိကိုယ်ကိုသေ. ငါတို့သည်မှန်မဟုတ်ကြမွေးဖွားခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နောက်တဖန်လူအပေါင်းတို့ကျော်မွေးဖွားရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ယောဟနျသကျွန်တော်တို့ကိုဒီယောက်ျားကိုဘွားမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးထက်ကွဲပြားကြောင်းကိုသိရန်လိုသည်. သူကသေချာအောင်ကျွန်တော်နားလည်စေရန်အကြိမ်ကြိမ်ခြေစစ်ပွဲပေးသည်. "အသှေးကိုမ" လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီသဘာဝအနွယ်ဖွားသို့မဟုတ်မျိုးရိုးနဲ့ဘာမှရှိကြောင်းသိရန်လိုသည်. "မဇာတိပကတိ၏" လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူအစပြုတာဘဲသိရန်လိုသည်. လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီယောက်ျားကိုဘွားမြင်သောသူအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးကိုသိရန်လိုသည် "မယောက်ျား၏အလိုတော်၏". ဒီအသစ်မွေးဖွားခြင်းသညျဘုရားသခငျ၏!
နောက်တဖန်မွေးဖွားလူတို့နှင့်အတူတက် လာ. ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများမဟုတ်ပါ. ဒါဟာခရစ်တော်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်သောသူတို့အဘို့အအဖြစ်မှန်င်. ထိုသို့အရာအားလုံးပြောင်းလဲတဲ့အဖြစ်မှန်င်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျသစ်တစ်ခုနှလုံးပေးသည်, အဖြစ်ကောင်းစွာမျက်စိသူ့ကိုမြင်ရဖို့အဖြစ်, နှင့်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်သင်၌ကျိန်းဝပ်. သင်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါများမှာ.
အသစ်တစ်ခုခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်. သငျသညျတော့ဘူးတခွားလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မနေ, ဒါကြောင့်သူတို့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရပ်တန့်. သငျသညျသစ်ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုအဖွဲ့သည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးင်. ငါတို့သည်လည်းအသစ်သောကလေးမွေးဖွားအတူသဘောပေါက်ရန်ရှိသည်, ကျွန်တော်တစ်ဦးမိသားစုသို့မွေးစားခဲ့ကြရတယ်. ဒါကြောင့်သင်မိသားစုဝင်များ, ယုံကြည်ခြင်း၌ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ. သူတို့ကိုချစ်တယ်. သူတို့ကိုအားပေးပါ. ကျနော်တို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နောက်ဆက်တွဲသညျယရှေုကိုကူညီဤနေရာတွင်င်.
II ကို. သားတော်လိုပဲဆက်ဆံ
တစ်မိသားစုတစ်စုံတစ်ဦးကချမှတ်သည့်အခါ, သူတို့မွေးစားကလေးင့်ကဲ့သို့မွေးစားကလေးမခံစားရပါဘူးသေချာစေရန်အကြီးအတိုအရှည်ကိုသွား. သူတို့ကသူတို့ကိုမတူညီတဲ့နှင့်အဆင်မပြေခံစားရချင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပိုင်ကြပါဘူးတူကြပါဘူး. အဲဒီအစားသူတို့ရဲ့အခြားကလေးများကဲ့သို့သူတို့ကိုငါဆက်ဆံဖို့လိုခငျြ. ဒီနည်းအတိုင်းပဲ, ဘုရားသခင်သည်မိမိသားသမီးများကိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုချမှတ်သည့်အခါ, သူသည်မိမိအသာတစ်ပါးတည်းသောသားကဲ့သို့အကျွန်တော်တို့ကိုဆကျဆံ, ယရှေုသညျ.
သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးယုံကြည်မှုရန်ပုံငွေကလေးအကြောင်းပြောဆိုကြားသိဖူး? ဤသည်အဘယ်သူ၏မိဘများကြွယ်ဝသောဖြစ်ကြသည်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်, ပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သူတို့မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း, သူတို့လည်းယခုကြွယ်ဝသောင့်. ဒါကြောင့်လူတွေကသူတို့ကိုအမျက်သိုနေကြ, အခြားသူကလူတိုင်းကိုသူတို့ရှိသည်အမှုအရာသည်အခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်သောကွောငျ့. ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့အိမ်နှင့်သူတို့၏ချမ်းသာပျော်မွေ့, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့တပြင်လုံးကိုအသက်တာအလုပ်လုပ်ရတယ်. သို့သော်ငြားလည်း, ဒီကြွယ်ဝသောဆိတ်သငယ်သည်သူ၏အသက်တာ၌တစျနေ့လုပ်ကိုင်ဖို့မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်သူအခြားသူကိုလူတိုင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်င်. သူကအလုပ်မဆိုလုပ်နေကြခြင်းမရှိဘဲအားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်.
ဝိညာဉ်ရေးမှာစကားပြော, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရန်ပုံငွေကလေးငယ်များမှာ. ရုံငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရဲ့မိသားစုသို့ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ဇာတိအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာစည်းစိမ်ဥစ္စာရ. ကျနော်တို့ကသူ့တရားကိုဆန့်ကျင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်, ကျွန်တော်သူ့ကိုမနာခံပါတယ်, ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ကြသောအခါငါတို့မူကားသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိအားလုံးအကြိုးကြေးဇူးမြားရ. အရာအားလုံးပြည့်စုံသညျယရှေု၏လုပျငနျးကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်.
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထောက်. သူ့ကိုအပြစ်မရှိသိသောဒုစရိုက်အပြစ်ဖြစ်စေ, ကိုယ်တော်၌ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ဖြစ်လာစေခြင်းငှါဒါကြောင့်။ " (2 ကောရိန္သု 5:21)
ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအရပ်တို့ကို switched. သူကကျွန်တော်တို့ကိုတူဆက်ဆံခဲ့သည်, ကျွန်တော်သူ့ကိုတူဆက်ဆံရ. ကအံ့သြဖွယ်မဖြစ်? သငျသညျဘုရားသခငျသညျသဖြင့်မွေးစားနေရတဲ့အခါ, သင်၌သူ့ကိုမယ့်ညစ်ပတ်ပေရေကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်မြင်ကြပါတယ်, အချည်းနှီးအပြစ်သား, ဒါပေမယ့်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်.
ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုစမ်းသပ်မှုရလဒ်များအထွက် switched ရဲ့တူ. ကျနော်တို့တစ်ဦးကရ + ကျွန်တော်တို့ပျက်ကွက်သော်လည်း, ယရှေုသညျပျက်ကွက်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်ခံစားနေရ.
ငါနှုတ်ကပတ်တော်၌ငါဖြစ်သင့်လမ်းကိုဖြစ်မလာကြသောအခါငါတစ်ခါတစ်ရံသိ, သို့မဟုတ်ငါဖြစ်သင့်တူငါတခြားသူတွေနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှခဲ့ကြပြီမဟုတ်သည့်အခါ, ငါသည်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုအရူးဖြစ်၏တူခံစားရရန်စတင်. ပြီးတော့ကဆုတောငျးလမှငါ့ကိုစောင့်ရှောက်, သူသည်ငါ့ထံမ​​ှကြားချင်ပါဘူးတူငါခံစားမိသောကြောင့်,. သူတို့အားကြိမ်၌သူသည်ငါ့ကိုမွေးစားသောအခါမှတ်မိဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်, သူသည်ငါ့ကိုယေရှု၏ဖြောင့်မတ်ပေး၏.
ဒါကြောင့်သူကတော့ဘူးငါ့ကိုအရူးမဟုတ်ဘူး; သူခရစ်တော်သည်ငါနှင့်အတူကျေနပ်င်. အကြှနျုပျ၏အပွစျကိုသူ့ကိုဝမျးနညျး, ဒါပေမဲ့သူ့မိသားစု၌ငါ့အစက်အပြောက်ပြောင်းလဲဘယ်တော့မှ. ငါကအဲဒီကိုရောက်ဖို့မကြာဘယျသို့ပွုဘဲ, ငါ့အကိုဖယ်ရှားမည်ဟုငါလုပျနိုငျဘာမှမရှိဘူးင်. ကိုယ့်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်ညျနောငျတရစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်.
ဤသည်ကိုလည်းအခြားလူအပေါငျးတို့သအချိန်ကိုနှစ်သက်ဖို့ကြိုးစားနေ၏ကျွန်ခံမှငါ့ကိုလွှတ်ပေးခြင်း. ငါတကယ်ငါ့ကိုအလွန်အမင်းစဉ်းစားရန်လိုလူတိုင်းနဲ့ရုန်းကန်. ဆုံးနဲ့ငါ့ကိုကူညီပေးသည်သောအရာငါသည်သူတို့၏ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းသတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ငါပြီးသားဘုရားသခင့်ရှိသည်ကြောင့်. သူ့ကိုငါနှင့်အတူကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ပြီးသားပေါ့. ငါအစဉ်အမြဲငါလိုပါလိမ့်မယ်အားလုံးအတည်ပြုချက်များ
ဒါဟာသင့်အသက်တာကိုအခြားလူထင်အဘယျအပေါ်မှာအခြေခံပြီးအသက်ရှင်ရန်အကျဉ်းထောင်ရဲ့. ဘုရားသခငျသညျခရစျတျော၌သငျ၏အလွန်အမင်းထင်, ဒါကြောင့်လုံလောက်တဲ့ကြစေ. သင်အစဉ်အဆက်လိုပါလိမ့်မယ်အားလုံးအတည်ပြုချက်များ.
ကျနော်တို့ကိုထာဝရအသသေရရှိခဲ့သည်င်, ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နှင့်အတူအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ရ. ကနေထိုင်ခဲ့ခံရဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ကျနော်တို့ပေါများဘဝဘဝရ. ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲရှငျဘုရငျ၏ပြီးပြည့်စုံသောကိုးကှယျတှငျနထေိုငျရ.
ယခုဘဝငါတို့သည်အားလုံးမဟုတ်ပါ. ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်တူအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါ? အခုကျွန်တော်တို့ပျော်စရာသောအရာတို့ကိုပြီးနောက်ထာဝရနှင့် Chase များအတွက်အရေးပါသောအရာတို့ကိုလျစ်လျူရှု. ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? ဒါဟာကျွန်တော်ရအကောင်းဆုံးမဖြစ်. ကျွန်တော်တို့ကောငျးကငျဘုံ၌သူနှင့်အတူနေသည့်တိုင်အောင်ဤသည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန်ကြှနျုပျတို့သညျဤမြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသည်အချိန်ဖြစ်ပါသည်.
ကြှနျုပျတို့သညျဤကျနော်တို့ပဲကိုယျ့ကိုယျကိုခံစားရန်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုပြုပါရန်ရှိသည် get အားလုံးဖြစ်ပါတယ်ထင်လာတဲ့အခါ. ကြှနျုပျတို့သညျဤရုံ preview ကိုသိသောအခါမူကားငါတို့သည်ငါတို့၏ထာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနိုင်.
3. ဖခငျမတ်ေတာသ & ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
ငါအလှနျခငါ၏သားကိုချစ်. ထိုအခါငါကိုသူ့အဘို့ဘာမှလုပျမညျ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုချစ်သောသူနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့အဘို့အကောင်းသောရဲ့လုံးဝဘာမှအားငါပေးမည်. သငျသညျအခုအချိန်မှာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ခုခုရှိတယ်လျှင်ဒီတော့သတိရ, ဘုရားသခင်ကပေးစေခြင်းငှါမတတ်နိုင်သောကြောင့်ထိုသို့မဖွင့်. သင်တို့အဘို့ကောင်းသောမယ်ကြောင့်င်.
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်တဲ့သားကဲ့သို့ဆက်ဆံသောအချက်ကိုထပ်မံသက်သေပြကျွန်တော်တို့သူ၏မေတ္တာကနေကွဲကွာရမည်ကိုဘယ်တော့မှနိုငျသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ယေရှုအားစည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြ, ယရှေုသညျခမညျးတျောမှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏. ယေရှု၌ရှိကြ၏သောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျမှကွဲကွာစေခြင်းဘယ်တော့မှနိုင်.
မေးခွန်း: ဒါကြောင့်သူအထံတော်မှဘုရားသခငျ၏သားမကွာစေနိုင်? အဖွေ: အဘယ်သူမျှမသူ၏မေတ္တာကနေဘုရားသခင့်ကလေးများခွဲခြားနိုင်ပါတယ်.
"ကျနော်သေချာပါသည်သေခြင်းမဟုတ်, ဘဝကိုလည်းမကြောင်းဖြစ်၏, ကောင်းကင်တမန်များမဟုတ်သောမင်းတို့မဟုတ်, မဟုတ်အမှုအရာပစ္စုပ္ပန်မျှမလာရန်အမှုအရာ, မဟုတ်အင်အားကြီး, အမြင့်မဟုတ်သလိုအတိမ်အနက်ကိုမျှမ, အားလုံးဖန်ဆင်းခြင်းအတွက်အခြားသူမဟုတ်, ဘာမှ, ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ငါတို့သခင်ထံမှကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ " (ရောမ 8:38-39)
သငျသညျဆိခဲ့ကြရတဲ့အခါ, သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုသငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုပေးခဲ့ကြခဲ့, ထို့နောက်နောက်ကျောကယူဖို့ကြိုးစား? ငါ့နှမငါ့ထံသို့ဒီလိုလုပ်ဖို့အသုံးပြု. သူမကတကယ်မကြိုက်ကြဘူးကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိသည်မယ်လို့, ပြီးတော့သူမငါ့အားဆက်ကပ်မယ်လို့. ဒါဟာသူမရဲ့ဖို့အမှိုက်ခဲ့သည်. ဒါကြောင့်ငါကရင့်, ထိုသို့ငါ၏နာမကိုရေးသား, ဒါကြောင့်-ကြောင့်ပျော်မွေ့သတ္တုတွင်းင်. ကောင်းပြီယခုငါရှိသည်သောငါတကယ်ကခံစားတာပါ, အခုဆိုရင်သူမကခံစားငါ့ကိုကြည့်နှင့်သူမပြန်လိုလား. ဟမ်? ကောင်းပြီငါကမှမဆိုအထူးပူးတွဲမှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်းရှေ့တော်၌, ယခုငါပြုပါ. အဲဒါငါ့ဟာ. ငါကအပေါ်မှာငါ့နာမကိုအမှီ wrote နှင့်ကစားရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းများကိုထွက်နေသေးတယ်. ဒါဟာဘုရားသခင်နှင့်အတူအလားတူင်. ယခုငါတို့ကသူ့အနေကြောင်း, သူကျွန်တော်တို့ကိုဆို. သူကပြောပါတယ်, "မိုင်း!"မည်သူမျှသူ့ကိုနှင့်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်.
ကျနော်တို့ခက်ခဲကြိမ်ဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါဤအသတိရဖို့ရှိသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲအကြိမ်အဘယ်သူမျှမဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်မှကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားနိုင်. တကယ်တော့, တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အခက်ခဲကြိမ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုအထောက်အထားဖြစ်ကြောင်း.
ဘုရားသခင့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းပစ္စယမပေးပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်ပေးသနား. ကျွန်တော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွညျ့စုံပွီးနောကျသွားသူ့ကိုထားခဲ့ရတဲ့အခါ, ကျွန်တော်တစ်ဦးအတု၏ search အတွက်အစစ်အမှန်အရာထွက်ခွာနေတာပါ. သငျသညျသူ၏စကားထဲမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခငျသညျနှငျ့တှေ့ဆုံနှင့်သူ့ထံမှကြားနိုင်. သူသည်သင်၏ပဌနာစကားကိုနားထောင်နှင့်သူတို့ကိုပြန်ပြောမည်. သငျသညျအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ခဲ့လျှင်သူသည်သင်တို့အနီးသို့ဆှဲမညျ.
III ကို. သားတော်ရန်ကိုက်ညီ
ငါတို့ဘယ်မှာသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုချန်မထားပါဘူး. သူကပိုပြီးကိုယ်တော်နှင့်တူကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်စေသည်. ဒါကြောင့်မသာသူသညျယရှေုတူကျွန်တော်တို့ကိုပြုမူဆက်ဆံပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူသညျယရှေုတူကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်စေသည်.
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခံရကျိုးပဲ့ခံအကြောင်းကိုပြောဆိုသော. ကောင်းပြီသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏စုံလင်သောပုံသဏ္ဌာန်, နှငျ့ဘုရားသခငျသညျယရှေုတူကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ကသူ၏ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်မှကျွန်တော်တို့ကိုညီ. ကျနော်တို့မိသားစုမှာရောက်နေတူကြည့်ဖို့စတင်.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ထားခဲ့ပါနဲ့ယေရှုအပေါ်အရာအားလုံးအလောင်းအစားဖို့ဆန္ဒရှိရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၏ကြင်နာအကြောင်းကိုပြောဆိုသော. ရတဲ့အခါဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုချမှတ်, ငါတို့ဘယ်မှာသူကျွန်တော်တို့ကိုချန်မထားပါဘူး.
ငါသညျယရှေုကိုယုံကွညျ ပတ်သက်. အခြားနေ့ကအချို့သောကျောင်းသားများကစကားပြောခဲ့, နှင့်လူတစ်ဦးကဆိုသည်, "ငါယုံကြည်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါဆဲတခါတရံပျော်စရာရှိသည်ချင်. အစဉ်မပြတ်ငါခရစ်ယာန်တွေကိုပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ခြင်းတူမကျင့်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ "လူတစ်ဦးယုံကြည်သောအရာအခြို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ကမျြးစာကိုတောင်းဆိုသည်ယုံကြည်ခြင်း၏ကြင်နာသင်တို့ရှိသမျှသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့အပြစ်တရားမှာကြည့်ရှုလမ်းကိုပြောင်းလဲ. သင်ကမှဖွင့်.
"သင်မတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမလိမ့်မည်ဟုမသိကြ? လှည့်ဖြားခြင်းကိုမပြုကြနှင့်; အကျင့်ပျက်အလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလည်းမ, မဟုတ်ကိုးကွယ်သူများ, မဟုတ်သူ့မယားကိုပြစ်မှားသော, လိငျတူဆကျဆံလေ့ကျင့်တဲ့သူမဟုတ်သလိုယောက်ျား, မဟုတ်သူခိုးတွေ, မလောဘကြီး, မဟုတ်သေသောက်ကြူးတို့၏, မဟုတ်ရေး, မဟုတ် swindlers ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်. ထိုအထိုကဲ့သို့သောသင်တို့တွင်အချို့သောခဲ့ကြ. သို့သော်သင်သည်ဆေးကြောခဲ့ကြ, သငျသညျသနျ့ရှငျးစခဲ့ကြ, သငျသညျသခငျယရှေုခရစျ၏နာမ၌နှင့်ငါတို့ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တရားမျှတကြတယ်။ " (1 ကောရိန္သု 6:9-11)
သူတို့သညျအရာဖြစ်ကြ၏ တင်းမာနေအတိတ်. ကျနော်တို့တော့ဘူးသူတို့အမှုအရာအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး.
သငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်သူမ၏မိဘပြောပြနေတဲ့ကလေးကိုမြင်လျှင်လျှင်သင်အဘယ်သို့ပြုရပါလိမ့်မယ်? ပတ်ပတ်လည်သူမ၏မိဘများမိန့်အိမ်တအိမ်ပတ်ပတ်လည်တွား? သငျသညျသူမရူးသွပ်ခဲ့ထင်ပေ! အဘယ်ကြောင့်? သူတို့မိဘများဖြစ်ကြသောကြောင့်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကကလေးများကဲ့သို့သရုပ်ဆောင်နေကြတယ်. ဝမ်းနည်းဖွယ်ပြဿနာရှိနေတတ်တယ်လူအခြို့တို့တန်ခိုးတော်နှင့်အခွင့်ထူးများပေမယ့်သူတို့ကို၌ကျင်လည်ဖို့ငြင်းဆန်သောအခါ. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည်အပြစ်၌အသက်ရှင်ရန်အဘို့အဒါဟာပင် crazier ဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်အပြစ်တရားအုပ်စိုးရှိသည်နှင့်သင်လွတ်လပ်ခွင့်၌ကျင်လည်ခြင်းငှါအခွင့်ထူးပေးထားခဲ့ပြီးပြီ. အဘယ်ကြောင့်သင်အာဏာကိုလျစ်လျူရှုပြီးကျွန်စနစ်၌ကျင်လည်မယ်လို့?
ခရစျယာအဖြစ်, ဘုရားသခင့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူပြီ. အခုဆိုရင်ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခရစ်တော်၌နေသောရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်. သငျသညျခရစျတျော၌ရှိကြ၏ အကယ်. သင်တစ်ဦးမုသာကိုသုံးသောသူမဟုတ်. သင်တစ်ဦးလိင်တူဆက်ဆံသူမဟုတ်. သင်တစ်ဦးသူခိုးမဟုတ်. သင်တစ်ဦးသူတော်စင်များမှာ. ဒါကပစ္စည်းပစ္စယတော့ဘူးသင်တို့အပေါ်မှာတန်ခိုးမရှိရှိပါတယ်.
ငါကလူကယနေ့ဤအတူရုန်းကန်နေကြတယ်ဆိုတာကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ခရစ်တော်ရောက်နေလျှင်အဆင့်အတန်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်င်. ငါအပြစ်တရား၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောသံသရာ၌ဘမ်းမိသောအခါငါသည်ငါ့ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌တစ်ရာသီသတိရ. ငါသည်ငါ့အပြစ်တရားမှခါလဒဲပြည်သားခဲ့သည်တူထိုအခါငါခံစားရတယ်. အကြှနျုပျ၏တိုးတက်မှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းသည်ဤသမ္မာတရားကိုကျက်ခဲ့: ငါကိုပြစ်မှားရန်မလိုပါကြောင်း. ငါအတိတ်ကျွန်အဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ကြရတယ်
ဘုရားသခင်သည်သင်၏အသက်တာ၌လုပ်နေတယ်အဓိကအရာသငျသညျသနျ့ရှငျးသောအောင်သည်. သူသည်သင်၏သက်သာခြင်းအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရဲ့ထက်ပို, သူသည်သင်၏သန့်ရှင်းသောတန်ဆာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်င်. ဟေဗြဲခုနှစ်တွင် 12, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်စည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်. စာရေးဆရာဆွေးနွေးပွဲ. တစ်ခါတစ်ရံဘဝကိုထိခိုက်လိမ့်မည်. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ကြိမ်ဖြတ်သန်းသွားသောအခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမချစ်ပါဘူးမဆိုလိုပေ. တကယ်တော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲတဲ့ကြိမ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သောသူ. အခြေခံအားဖြင့်သုံးလေ့ရှိသောဤစကားလုံးစည်းကမ်းလေ့ကျင့်ရေးကိုဆိုလိုသည်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုလေ့ကျင့်နှင့်ပိုပြီးယေရှုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်သည်. သူကကျွန်တော်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောအောင်သည်.
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးသန့်ရှင်းစေဘဲဘုရားသခငျ၏မတ်ေတာမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်. ကျွန်တော်သူ၏သားတို့အမင့်ဆိုလိုပေ. တခါတရံသူပင်ဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်တရား၏အကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းဆုံးမသောပစ်. သငျသညျပွစျမှားတဲ့အခါမှာ, ရွံရှာဘွယ်သောအကြိုးဆကျရှိပါသညျ, ကြောင်းအဖြစ်မျှသာတိုက်ဆိုင်မှုယူကြဘူး. သငျသညျဘုရားသခငျသညျသငျသညျဆုံးမပဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်. သူကဆောင်တတ်၏အဘယျအပွစျဖွရောသငျသညျခြင်းဖြစ်ပါတယ်, သူသည်လည်းသင်တို့ကိုပိုပြီးခရစ်တော်နှင့်တူပါစေရန်သင့်အားပုံဖော်သည်. ကျွန်တော်တို့ scrawny များမှာတူဒါဟာင်, နှင့်စမ်းသပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ကူးပါစေ. ယရှေုသညျစုံလင်သောဝိညာဉျရေးရာရိုက်ကူးဖြစ်ပါသည်, ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုတူကျွန်တော်တို့ကိုအောင်လိုလား.
နောက်ဆုံးတွင်ဤဘုရားရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါသည်. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားထုတ်မှုကနေတဆင့်တတ်, သငျသညျခရစျတျောရောက်နေလျှင်မူကားသူနှင့်ပြုမည်နိုင်. ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်တားပါဘူး. သင်သည်ကိုယ်ကိုမပြောင်းနိုင်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပေမည်, နှင့်စစ်မှန်တဲ့င်. ဘုရားသခငျသညျသူသည်သင်တို့ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ကတိထားတော်မူပြီရှိရာအရပ်တို့ကိုကိုသွားပါ.
သငျသညျခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, ဒါကြောင့်သင်မည်သူကိုသိရန်အရေးကြီးပါတယ်နှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့ကတိသင်တို့အဘို့အဘယ်သို့သောဖြစ်ကြသည်. သငျသညျမွေးစားခဲ့ကြ. သငျသညျဘုရားသခငျ၏သားသို့မဟုတ်သမီးများမှာ.
ငါ့သားငါ့သားကိုဖြစ်ခြင်းမှအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးရရှိသွားတဲ့. ငါသူ့ကိုဂရုစိုက်, သူ့ကိုပေး, နှင့်တာသေချာပါကသူတိုက်ကျွေးမယ့်လုပ်. သူတို့သညျတူညီသောအခွင့်ထူးပတ်ပတ်လည်ရုံမဆိုကလေးကမ်းလှမ်းကြသည်မဟုတ်. သို့သော်သင်မွေးစားမရနိုငျမဆိုလိုပေ.
ဧဝံဂေလိတရားကိုကမ်ဘာ​​ပျေါမှာအမြားဆုံးသီးသန့်နှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်သတင်းစကားဖြစ်ပါသည်. ဤရွေ့ကားကောင်းကြီးမင်္ဂလာအချို့မှသာသွား, ဒါပေမဲ့အားလုံးမှရရှိနိုင်. ခရစ်တော်ကိုးစား. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျချမှတ်လိမ့်မည်. သူကသင်ရရှိခဲ့သည်-ပထမဦးဆုံးဖူးပါဘူးအမှုအရာအားဗွေဆော်သူ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမူမည်.
3. သငျသညျဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. များအတွက်အများဆုံးကျေးဇူးတင်ဘာတွေလဲ?